Warbixinta Agaasinka McKnight ee Heshiiska Cimilada ee Paris
Machadka McKnight wuxuu soo dhaweynayaa heshiiska cimilada adduunka ee lagu gaarey 200 oo wadan. Bulshada rayidka ah, ganacsatada, maalgashadayaasha, magaalooyinka, iyo dowladaha oo dhan waxay bixiyeen horumarin muhiim ah oo u hoggaansamaya heshiiska caalamiga ah ee Paris. Wada-xaajoodka cajiibka ah ee lagu soo bandhigay shirku wuxuu caddaynayaa inaan u baahannahay inaan si degdeg ah wax uga qabanno khatarta isbeddelka cimilada ee ka dhalan karta bulshadeena, dhaqaalaheena, iyo qorshaha nolosheena.
McKnight waxaa ka go'an inay taageerto xalalka xalka maalgelin iyo maalgelin. Maalgashadayaasha hay'adaha, oo ay ku jiraan McKnight, eeg isbeddelka cimilada sida halis dhab ah oo ku wajahan nashqadaheenna, hanjabaadda soo celinta waxaan ku tiirsanaaneynaa inaan taageerno boqolaal aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqeynaya gobolka oo dhan iyo wixii ka baxsan. McKnight wuxuu ka mid ahaa 400 oo maal-gashaday oo matalaya $ 24 trillion oo hantida saxiixay Qoraalka Maalgashiga Caalamka isaga oo ku baaqay heshiis hufan. Heshiiska Paris wuxuu ka kooban yahay calaamado badan oo suuqa ah oo ay maalgashadayaashu raadinayaan, waxaana ay sii wadi doontaa maalgashiyada sii wadi doona in ay hoos u dhigaan kharashka iyo ballaarinta gaadiidka tiknoolajiyadeed ee hooseeya iyo sidoo kale hirgelinta mowjado cusub oo lagu horumarinayo.
Xaaladdayada gobolka Minnesota waxay horey u muujisay hoggaaminta jawiga cimilada ee dhammaan qaybaha - dawlad-goboleed iyo dawlad hoose; waaxdeena gaarka ah, oo ay ka mid yihiin hoggaanka Fortune 500 shirkadaha korontada iyo korontada; iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn, macaamiisha, iyo muwaadiniinta oo dhan guud ahaan gobolka.
Ballan-qaadka laga sameeyay Paris waa marqad awood badan oo ku saabsan waxa la qaban karo marka aynu isu imid. Hadda waxaan u baahanahay tallaabo wada jir ah oo joogto ah si aan u fulino balanqaadkan.